Amathiphu angu-5 Okwenyusa Amazinga Okuguqulwa Kokukhangisa Ngevidiyo Yakho | Martech Zone
Amathiphu angu-5 Okwenyusa Amazinga Okuguqulwa Kokukhangisa Ngevidiyo Yakho
NgoLwesibili, Novemba 30, 2021 NgoLwesibili, Novemba 30, 2021 Daniel Salikov
Kungakhathaliseki ukuthi yisiqalo noma ibhizinisi eliphakathi, bonke osomabhizinisi babheke ngabomvu ukusebenzisa amasu okuthengisa edijithali ukwandisa ukuthengisa kwabo. Ukumaketha kwedijithali kufaka phakathi ukwenziwa kahle kwenjini yokusesha, ukumaketha kwenkundla yezokuxhumana, ukumaketha nge-imeyili, njll.
Ukuzuza amakhasimende angaba khona nokuba nomkhawulo wokuvakashelwa amakhasimende ngosuku kuncike ekutheni uyimaketha kanjani imikhiqizo yakho nokuthi ikhangiswa kanjani. Ukuvezwa kwemikhiqizo yakho kusesigabeni sesikhangiso senkundla yezokuxhumana. Wenza imisebenzi eyahlukene njengokuthumela izithombe nombhalo, ukulayisha ividiyo, kanye nokwengeza okuqukethwe okunobuciko ukuze uqhubekisele phambili ukubandakanyeka kwezithameli.
Phakathi kwazo zonke lezi amasu, kokuba izikhangiso zevidiyo sebenza kahle kakhulu ukumaketha imikhiqizo futhi ufinyelele izethameli eziphezulu. Ngakho-ke, ukumaketha kwevidiyo kuyithuluzi elinamandla le-inthanethi elithengisa izinsizakalo futhi lakhe umkhiqizo wakho.
Ngo-2021, ukusetshenziswa kwemali yokukhangisa kwamavidiyo edijithali e-United States kwakulinganiselwa kumadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-55.34 futhi umthombo wabikezela ukuthi ukusetshenziswa kuzokwenyuka kuye ku-78.5 bhiliyoni ekupheleni kuka-2023. Isamba esichithwe yizikhangiso zedijithali e-US bekulindeleke ukuthi sikhuphuke sisuka ku-191 siye ku-250. izigidigidi zamadola aseMelika ngesikhathi esifanayo.
Futhi, ukuze wenze amasu akho okukhangisa ajabulise kakhulu, tshala imali ezithombeni zevidiyo. Amavidiyo opopayi aheha ukunakwa kwabasebenzisi ukuthi baguqule. Ukwenza ividiyo ekhangayo kungase kube inselele ngakho-ke ungase ufune ukuqasha ukukhiqizwa kwamavidiyo nesevisi yokugqwayiza ukuze usize.
Ziyini Izikhangiso Zevidiyo?
Izikhangiso zevidiyo eziku-inthanethi noma ukukhangisa ngevidiyo kuyindlela esebenza kahle kakhulu yokukhangisa ku-inthanethi. Okuqukethwe kokuphromotha ezinkundleni zokuxhumana kudlala ngaphambi, ngesikhathi, noma ngemva kokusakaza okuqukethwe. Abanye ochwepheshe bokumaketha kwemidiya baphinde banwebe incazelo yokukhangisa ngevidiyo ukuze ifake izikhangiso zokubonisa ezinokuqukethwe kwevidiyo, njengalezo eziqala ukudlala ividiyo lapho umuntu ebeka ikhesa phezu kwabo kanye nezikhangiso zamavidiyo zomdabu ezithuthukiswa kumanethiwekhi ezikhangiso zedijithali.
Nasi isibonelo sesikhangiso esiyividiyo esifushane esisikhiqizile:
Akungabazeki ukuthi ukukhangisa ngevidiyo kungenye yezindlela ezidume kakhulu zokukhulisa ibhizinisi lakho futhi ufinyelele izethameli eziku-inthanethi. Ochwepheshe balindele futhi bakholelwa ukuthi izikhangiso zevidiyo zizobusa ishumi leminyaka elizayo, okuphakamisa ukuthi manje isikhathi esifanele sokuba ochwepheshe bezokuthengisa bandise ulwazi lwabo kulesi sizinda. Futhi, kufanele baphenye ukuthi bangakuthuthukisa kanjani ukufinyelela kwabo kanye nokusebenza kahle kukonke ngemikhankaso eyahlukene.
Ukusuka ekungezeni izihloko zezindaba ezikhangayo ukuya ekunamathiseleni izithombe ezinamandla, nanka amathiphu angu-5 ezikhangiso zamavidiyo amahle azokhuphula izinga lokuguqulwa kwakho ngokumaketha kwevidiyo.
Amathiphu okumelwe uwalandele ngenkathi wengeza izikhangiso zevidiyo
Ukuze uthole ukumaketha kwevidiyo okusebenzayo nezinga eliphezulu lokuguqulwa, nawa amanye amathiphu namasu enqubo yokudala okufanele icatshangelwe. Isikhangiso sakho kufanele sigqamise inkinga engaxazululwa yinkampani noma umkhiqizo wakho, sebenzisa iskripthi esihle sohlelo lwevidiyo, futhi ukhethe inkundla efanele. Nawa amathiphu angu-5 ezikhangiso zevidiyo eziletha ukuguqulwa.
Yenza Isiqalo Sesikhangiso Sevidiyo Yakho Sithakazelise futhi Ugqamise Ibhrendi Yakho
Ukuthola umbono wesikhangiso esiyividiyo yakho akwanele ukuletha ukuguqulwa ngoba ukuqala kwevidiyo yakho kubaluleke kakhulu. Uma ungafuni ababukeli beqe isikhangiso noma bachofoze bahambe, kufanele ulalele ukuqala kwesikhangiso ukuze wenze imizuzwana embalwa yokuqala iqaphele futhi ibalwe.
Ukuze uhlanganise izithameli zakho, yenza umzamo omncane futhi uqale ividiyo yakho ngesitatimende esihehayo ngokubhekana nezinkinga ezithile ezivamile, ubuze umbuzo ohlobene, noma wengeze okuthile okuthakazelisayo okwenza umkhiqizo wakho ugqame.
Bonke abanikazi bamabhizinisi bafuna amakhasimende abone izikhangiso ekugcineni; uma beyishiya ngesikhathi, mancane amathuba okuthi ukuthengisa kwakho kukhuphuke. Ngakho-ke, qala izikhangiso zevidiyo yakho ngezithombe ezinhle kakhulu, futhi ufake izithombe ezifanele nombhalo ocacile.
Qiniseka ukuthi umkhiqizo ugqanyisiwe futhi ungavusa intshisekelo yamakhasimende ngokushesha. Ngale njongo, kufanele utshele amakhasimende ukuthi kungani ibhrendi yakho ihamba phambili nokuthi amasevisi akho ahlinzeka kanjani ngezinzuzo. Abantu balindele yonke into kusukela kukhwalithi yomkhiqizo kuya ekusekelweni kwamakhasimende, ngakho isikhangiso sakho kufanele sigcizelele ukuthi kungani inkampani yakho ihlukile futhi enokwethenjelwa.
Ubufakazi Bomphakathi Bubalulekile Ezikhangisweni Zevidiyo
Elinye ithiphu ongagxila kulo ngenkathi wenza ukukhiqizwa kwevidiyo ubufakazi bomphakathi. Kuyinto evamise ukunganakwa yokukhangisa kwenkundla yezokuxhumana. Njengoba sazi ukuthi kunomncintiswano omningi emhlabeni wedijithali, ngakho-ke udinga ukwenza ngaphezu kwalokho ukuze unxenxe amakhasimende akho ukuthi uhlinzeka ngamasevisi ekhwalithi aku-inthanethi angawethemba. Noma kunjalo, akulula ukugijima endaweni eyodwa nezimbangi ezingenakubalwa.
Bonke abanikazi bamabhizinisi kufanele basebenzise lezi ukukhiqizwa kwevidiyo amasu okubona umkhiqizo wabo ufinyelela emazingeni aphezulu. Kulesi simo, ukwakha ukwethembana kufanele kube yinto ehamba phambili. Ngaphandle kwalesi sici, kuzoba nzima kakhulu ukukholelwa lokho okushoyo nezithameli zakho.
Bangase babe nokungabaza, ikakhulukazi uma kuwumkhankaso ophezulu lapho uhlanganyela khona nabantu abangakaze babuke umkhiqizo wakho ngaphambilini. Ngakho-ke, ukufaka ubufakazi bomphakathi ekukhangiseni kwamavidiyo, ungasebenzisa ubufakazi, ukubuyekezwa, amabheji enkanyezi, nokuqukethwe okukhiqizwa umsebenzisi.
Ubufakazi busiza ukukhipha amagama emlonyeni wekhasimende lakho bese wabelane ngamazwana nomhlaba. Izibuyekezo noma izimpendulo zamakhasimende zichaza konke ukuzizwisa kanye nendlela amasevisi akho azuzise ngayo amakhasimende. Ngaphezu kwalokho, lobu bufakazi busiza amakhasimende amasha ekwethembeni umkhiqizo wakho.
Ukusebenzisa okuqukethwe okukhiqizwa umsebenzisi kunikeza amathuba akho ngamakhasimende ajabulela imikhiqizo noma amasevisi akho. Lokhu kusebenza kahle phakathi kwemikhankaso yefaneli futhi kuguqula abathengi abangaba khona ocingweni.
Sebenzisa Imfihlo Yemboni Yokukhangisa
Uma uqedile ngombono wokudala kanye nesiqalo sesikhangiso, kuhle ukuthi ubambe ukunaka kwabasebenzisi. Kodwa, kuthiwani ngezinga lokuthengisa nokuguqulwa? Kubalulekile ukushayela ukuthengisa futhi uthole ukuchofoza okwengeziwe ngaphandle kokuchitha amahora ambalwa.
Nonke nidinga ukuhlela izikhangiso ukuze uthole ukuthengiswa okuphezulu. Kunefomula eyodwa abakopishi abakhangisayo abathembele kuyo iminyaka eminingi ukuze baguqule amathuba abe ngabathengi abakhokhelayo ngokungaguquki. Ifomula ibizwa ngokuthi I-AIDA, okushoyo ukunaka, intshisekelo, isifiso, kanye nesenzo. Ungasebenzisa le fomula ukuze ukhiqize imibhalo yevidiyo futhi uthole ukuchofoza okwengeziwe ngokuzenzakalelayo ngaphandle kokutshala amahora amaningi ushaya ikhanda lakho odongeni.
Ngenkathi wenza ukukhiqizwa kwevidiyo, kungaba yividiyo evamile noma opopayi, kufanele udonse ukunaka kothile, ulondoloze intshisekelo, wakhe uthando ngemikhiqizo bese ubaphusha ukuthi benze okuthile. Lezi zinyathelo zizoqinisekisa ukuthi izikhangiso zihlala zihambisana, ziheha, futhi zigxile ekuguquleni.
Isikhathi Sesikhangiso Sevidiyo Yakho
Abantu abaningi babuka izikhangiso uma bezithola zijabulisa kodwa beqe kusenesikhathi uma isikhangiso siba side. Ngakho, gwema ukwenza ukunqoba kwakho kube idokhumentari. Gcina izikhangiso zevidiyo zizifushane futhi zimnandi ngoba iningi lezikhangiso zevidiyo eziku-inthanethi ziyimizuzwana engama-30 noma ngaphansi.
Ngenkathi ukhiqizwa ividiyo, gcina lobu bude obuphelele engqondweni yakho njengoba udala umbhalo wevidiyo. Nokho, amavidiyo amade nawo ayasebenza, uma ubhekene nokumiswa komkhiqizo. Isibonelo, uma uchaza okwenziwayo noma indaba mayelana nebhrendi yakho ehlanganisa umthengi noma omele inkampani, ividiyo ende ilungile.
Kunoma ikuphi, kuyadingeka ukweqa okuqukethwe okungabalulekile nokungadingeki. Futhi, zama ukusabalalisa umlayezo wakho ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze ugcine ababukeli bebukele futhi behlanganyela. Ubude besikhangiso esiyividiyo yakho kufanele buqinisekise ukuthi amakhasimende awabutholi buthuntu futhi bungathandeki.
Engeza ucingo esenzweni
Kungakhathaliseki ukuthi ividiyo yakho noma i-athikili enezela ukubizelwa esenzweni idlala indima ebalulekile ekutsheleni abantu ukuthi benzeni. Ukusebenzisa i-call to action (CTA) kwenza abantu bakhuthazwe okuqukethwe futhi kubasize banqume ukuthi ingabe kulungile yini ukuthenga umkhiqizo.
Ukubizelwa esenzweni kungaba isitatimende noma amagama ambalwa asiza abasebenzisi ukuthi benze okulandelayo uma sebebukele isikhangiso noma befunde isiqephu sendatshana esiphelele.
Ngaphezu kwalokho, umgomo wazo zonke izikhangiso zevidiyo uwukukhuthaza izethameli ukuthi zenze okuthile. I-call to action (CTA) ingaqoshwa noma yengezwe ngombhalo nangezithombe.
Ngokufanelekile, kuhle kakhulu ukusebenzisa ucingo esenzweni ekupheleni kwevidiyo. Isibonelo, ukuze ubonise amakhasimende akho, angavakashela ikhasi lakho noma iwebhusayithi ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, abhalisele isaphulelo namadili, noma athenge imikhiqizo namasevisi akho.
Ukukhangisa ngevidiyo sekuyithuluzi eliqine kakhulu eligcina amakhasimende akho exhumene nomkhiqizo wakho. Uma sekushiwo lokho, ukwenza amavidiyo ahlakaniphile, amafushane, nahehayo kubalulekile. Abantu abayiboni yonke into oyithumela ezinkundleni zokuxhumana, bahlunga okuqukethwe okuheha kakhulu, futhi uma kuziwa ezikhangisweni, bakhetha ezithakazelisa kakhulu. Ukumaketha kwevidiyo okusebenzayo kukugcina uzuza amakhasimende, kukhuphula ukuthengisa nokuqashelwa komkhiqizo. Ngakho-ke, izikhangiso zevidiyo kufanele zenziwe ngemva kokucabangela amathiphu okuxoxwe ngawo esihlokweni.
Tags: Ukuthengaizinga lokuguqulwa kwesikhangisoumkhakha wokukhangisakwasizabrandamazinga wokuguqulwaukuguqulwaukwandisa ukuguqulwa kwesikhangisoubude bevidiyomaphakathi nefaneliukunyakaza kwe-rocketubufakazi bezenhlalakahleubufakaziugcokuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisiizikhangiso zevidiyoukukhangisa ngevidiyoukukhiqizwa kwevidiyoisikhathi sevidiyo
UDaniel Salikov unguMqondisi Wezokumaketha e- Ukunyakaza kwerokhethi, i-ejensi yokuklama ukunyakaza egxile ekudaleni amavidiyo achazayo nawokuthengisa aqalayo.
I-Retina AI: Ukusebenzisa i-Predictive AI ukuze Kuthuthukiswe Imikhankaso Yokumaketha kanye Nokusungula Inani Lokuphila Kwekhasimende (CLV)
Indlela Yokuxoxisana Ngempumelelo Nabathonya